“Fier-Mada 2018”: nampiseho ny vokany ny tantsaha tohanan’Ambatovy | NewsMada
Tsy misy very intsony koa ny tain’akora avy nahodina nakana ny nikela sy ny kobalta vokarin’ny Tetikasa Ambatovy fa avadika ho zezika. Hita ao amin’ny tranoheva faharoa hiantohan’ny tetikasa Ambatovy ny “Madasul”. Fanaovana zezika sy provandy ary ny Ethanol, amidy mora izy ireo. Nambaran-dRakoto Rabevazaha Joel, tompon’andraikitra mitazona ny tranoheva, fa tsy mijanona eto amin’ny firenena malagasy fotsiny ny vokatra fa efa miparitaka hatrany ivelany. Fanehoana ny vokatra vita malagasy izany. Anisan’ny nahasarika ny mpitsidika ihany koa ny tranoheva fahatelo tohanan’Ambatovy, ahitana zana-kazo fihinamboa, kely dia misy voany.